Nhau - 1/2 "kana 5/8" Yakakora Ultra Yakajeka Yakapfava, Yakabatidzwa Girazi reIni Rink Fence
Yakapusa Girazi yeRink
Girazi rakapfava rinoshandiswa padivi pe rink. Girazi rakapfava rinoita zvinhu zviviri: inobvumidza vateereri kuona kusingadzorwe, uye inomira nekurohwa kwakaomarara kubva kune vatambi vanorovera mukati mayo.
Chimwe chidimbu chegirazi regirazi ndi5 / 8 kana 1/2 yeinchi gobvu, Girazi rinoda kuvezwa uye kupukutwa. Kuitira kudzivirira makona kubva kukwenya vanhu, magirazi ese anoda makona akachengeteka (10mm kutenderera makona ekuchengetedza)
Hockey girazi Kuchengetedza
Kazhinji kutaura, girazi rakadzikama rakachengeteka kune vatambi uye mafeni.
PS Heat Girazi rakanyoroveswa rinozove rakachengeteka pane girazi rakadzikama
LYD Girazi rinopa yakakwira-magumo hockey girazi. Isu tinopa yakakwira yepamusoro girazi rakadzikiswa rehoki dzehoki, uye zvigadzirwa zvedu zvakapfuura zviyero zvekuyedza zveUnited States neCanada.
Kana iwe uchida kudzidza zvakawanda nezve yedu hockey girazi, taura nesu nhasi.
Post nguva: Jul-16-2021